हर्नियाको उपचारका लागि निकै उपयोगी हुन्छ यो फल, यस्तो छ प्रयोग गर्ने तरिका – Annapurna Daily
On Aug 17, 2021 4,838
इर्रिड्यूसिबल हर्निया: यस प्रकारको हर्नियामा कुनै पनि स्थितिमा गाँठो देखिन बन्द हुँदैन ।
एब्सट्रक्सन हर्निया: जब आन्द्रामा दवाव पर्दा यो फाट्छ, जसका कारण मोशनमा पनि समस्या हुन्छ भने यसलाई एब्स्ट्रक्सन हर्निया भनिन्छ । त्यस्तो स्थितिमा बिरामीको तुरुन्ट सर्जरी गर्नु पर्छ ।
स्टे्रन्ग्युलेटेड हर्निया: जब आन्द्रामा रगत सञ्चालन बन्द हुन्छ, त्यस्तो स्थितिलाई स्ट्रेन्ग्युलेटेड हर्निया भनिन्छ । त्यस्तो स्थितिमा पनि बिरामीको तुरुन्त सर्जरी गरिन्छ ।
हर्नियाको सर्जरी दुई प्रकारले गरिन्छ । लेप्रोस्कोपिक, ओपन सर्जरी: लेप्रोस्कोपिक सर्जरीमा हर्नियालाई ठीक गर्नाका लागि सानो प्वाल पारेर सानो क्यामरा र सानो किसिमले बनाइएको शल्य चिकित्सा उपकरणहरुको प्रयोग गरिन्छ । ओपन सर्जरीमा धेरै काट्ने भएकाले घाउ ठीक हुन धेरै समय लाग्छ । बिरामी एक दुई हप्तासम्म पनि सामान्य रुपमा हिंडडुल गर्न असमर्थ हुन्छ ।
कुन कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ ? समयमा औषधी खानु पर्छ, जसले छिट्टै नीको हुन सकिन्छ । सर्जरीपछि डाक्टरको सल्लाह अनुसार नै नुहाउनु पर्छ ।
सर्जरी गरेको ५–६ दिनपछि विस्तारै हिंड्न शुरु गर्नु पर्छ, जसले गर्दा खुट्टामा रगत जम्न पाउँदैन र रक्त सन्चार पनि राम्रो हुन्छ । भारी सामान उठाउनु हुदैन । -नियमित जाच गराइराख्नु पर्छ । -स्वस्थ्य भोजन खानुको साथसाथै पानी पर्याप्त मात्रामा खानु पर्छ।
हर्नियाको आयुर्वेदिक उपचार: चर्चित भारतीय आयुर्वेदिक डाक्टर अबरार मुल्तानीका अनुसार हर्नियाको लक्षण पहिचान गरेर सुरुवातामै उपचार गर्न सक्यो भने यो निको हुन्छ। उनका अनुसार आयुर्वेदमा बर्रोलाई हर्नियाको उपचारका लागि निकै उपयोगी मानिन्छ। यसको प्रयोग सामान्य अर्थात सुरुवाती लक्षण देखिनासाथ गर्न सकिन्छ। सुरुवातमै यसको प्रयोग गर्न सके अप्रेशन बिनानै यसलाई ठिक पार्न सकिन्छ।
कसरी गर्ने प्रयोग ? बर्रोलाई त्रिफलाको एक अंग मानिन्छ। यसको बोक्रा निकाल्नुहोस् र पाउडर बनाउनुहोस्। त्यसपछि यस पाउडरमा जामुनको सिरका मिलाएर हनिर्या भएको भागमा लगाउनुहोस् । यो लेपलाई एक देखि डेढ घण्टासम्म त्यसै छोडिदिनुहोस् ।
हर्नियाका लक्षणहरु: शरीर कुनै कुराको लक्षणहरु देखिएता पनि त्यसलाई वेवास्ता गर्छौं,जसले भविष्यमा गम्भीर स्थिति उत्पन्न गर्छ। त्यसैले यदि तपाईंले त्यस्ता लक्षणहरु देख्नु भयो भने तुरुन्त डाक्टरसंग भेट्नु पर्छ। जसले गर्दा समयमा नै उपचार हुन्छ।
खोक्दा, हाछ्यँ गर्दा अथवा सामान उठाउँदा पेटको तल्लो भागमा पीडा महसुस गर्नु हर्नियाका लक्षण हो। त्यस्तै पेटमा भारीपनको महसुस हुनु, बान्ता र कब्जियतको समस्या र सुनिएको ठाउँमा पीडा हुनु पनि यस रोगका लक्षणहरु हुन्।